Baakadaha - Delta Injineer Belgium
Delta Injineerinka wuxuu bixiyaa qalab balaaran oo dhameystiran.
Sidoo kale fiiro gaar ah noo yeelo mashiinka xirxiran si aad u hesho xalka aad raadineyso.
Xirmooyinku waa mustaqbalka ururinta dhalada. Qiimaha bacda waa celcelis ahaan 20% qiimaha kabadhka baakadaha iyo yareynta shaqada si weyn. Marka laga soo tago, bacda ayaa ah hab aad u nadaafad badan oo xirxirasho ah: wax xiriir ah oo jirka ah oo ku saabsan sheyga la dhammeeyo marna halis uma ahan in wasakheynta kartoonada.
Dhammaan mashiinnada bacdeena ayaa ah, inta ay ku dhexjiraan meelahooda kala duwan, awoodaan inay soo saaraan dherer kala duwan oo xirxirasho iyo ballac leh si ay kor ugu qaadaan xasilloonida pallet. Waxaa sidoo kale loogu talagalay inay wax ka qabtaan dhalooyinka adag iyo sameynta wax soosaarka dhakhsaha leh.
Akhri wax dheeraad ah …
Wadooyinka oo yaraada
Marka xigta boorsooyinkayaga waxaad u adeegsan kartaa sida caadiga ah meerayaasha dariiqa ka sii yaraanaya si ay xasilooni dheeraad ah u siiyaan bacaha.
Xirmooyinka gogosha ayaa weli ah habka ugu badan ee dhalooyinka lagu xareeyo. Delta Injineerinka wuxuu bixiyaa adeegyo baaxad leh oo dhammeystiran, oo si sahlan looga dhex wareegi karo oo loo beddeli karo. Waxaan sidoo kale bixinnaa xulashooyin ballaaran oo ballaaran si wax looga qabto dhalooyinka ugu adag. Dhammaan baakadaheena buugga waxaa lagu qalabeysan karaa meel keydsan iyo tijaabo dhaqaale oo daadsan.
Xirmooyin badan oo dhameystiran ayaa la heli karaa, min-otomatik ilaa cutubyo otomaatig buuxa ah. Si aad u daabacdo weelasha guban kara ama ku soo dhajin kara dhalooyin madhan oo ku yaal saxanka, gogosha (baalalka bushimaha dhinaceeda ku yaal), go'yaal go'yaal ah, badh ama baakad buuxa. Unugyada otomatiga buuxa ee buuxa waxay sameyn karaan bambooyin ilaa 3.1m ah.
Soo ogow cutubyadayada isdabajoogga ah & xoqidda oo loo isticmaali karo in lagu dhejiyo qashinka, bacaha, lakabyada iyo dusha sare.
Unugyo kaladuwan ayaa diyaar u ah is dhexgalka si ay u helaan khadadka xirxiran oo buuxa.
U qaybi 1 gaarsiiyayaal imaatinka soo gala ilaa 6 gaarsiiyayaal socda.
Cutubyo loogu talagalay in lagu rido dhalooyin caag ah sanaadiiqda kartoonnada. Xulasho ahaan sanduuqyada si toos ah ayaa loo gelin karaa ama way uxiran karaan.
Si aad uguxiriso dhalooyin qaab habaysan loo xakameeyey sanduuqyo ama silos dabacsan.